किन हुन्छ ‘हर्ट अट्याक’ ? अट्याकपछि के हुन्छ ? – ramechhapkhabar.com
किन हुन्छ ‘हर्ट अट्याक’ ? अट्याकपछि के हुन्छ ?
आजभोलि हर्ट अट्याक कम उमेरका मानिसलाई पनि हुने गरेको छ । तर हर्ट अट्याक किन हुन्छ ? र यसको असर के हो भन्ने बारेमा आज पनि मानिस जानकार छैनन् । आउनुस् आज हामी हर्ट अट्याक हुनको कारण र यसले शरीरमा पर्ने असर बारे चर्चा गर्दै छाैं ।
हाम्रो शरीरमा मटुको काम भनेको अक्सीजन, पोषक तत्व तथा रगतलाई पम्प गरेर शरीरको दोस्रो भागमा पु-याउने हो । तर बढ्दो उमेरका साथ साथ या खराब खानपान र जीवन शैलीका कारण मुटुमा पुग्ने रक्त प्रवाहरमा रूकावट हुन्छ जसका कारण हर्ट अट्याक कारण बन्छ ।
जब मुटुमा अक्सीजन को कमी हुन थाल्त तव मुटुले मस्तिष्कमा इमरजेन्सी सिग्नल पठाउँछ । त्यसपछि मस्तिष्क यो इमरजेन्सी सिग्नल हड्डीमा पठाउँछ र मुटुमा अक्सीजन को कमी भएपछि शरीरको दोस्रो हिस्साको अक्सीजन सप्लाई कम गरिदिन्छ ।
यस्तो स्थिति मा तुरुन्त डाक्टरसँग जाँच गराउन आवश्यक छ ताकि समय रहदै यसमा नियन्त्रण गर्न सकियोस् । समय रहदै सही उपचार न गर्नका कारण मुटुको मांसपेशिहरु विस्तारै विस्तारै निष्क्रिय हुदै जान्छ र अन्तिममा मुटुले काम गर्न बन्द गर्छ । यस्तो स्थितिमा केही मिनेटमा नै मस्तिष्कको कोशिका पनि काम गर्न छोड्छन् ।